Waxaa Naloo Sheegay in Ninkii Haleelo Lahaa uu Ahaa ….., oo Garaabo Aabihiina u Raaci Jiray – Rasaasa News
Waxaa Naloo Sheegay in Ninkii Haleelo Lahaa uu Ahaa ….., oo Garaabo Aabihiina u Raaci Jiray
Jun 17, 2009 bulsho, Ogaden
Haleelo, caano macaan waxaa Ibogudhiyey Ninkii raaci jiray wiilkiisii, wiilku ma garanayo wanaaga hashu leedahay iyo in caanaheedii lagu soo koriyey, Hasha kama suurtowdo in ay wiilka haraatido, hashan dhibaato ayuu ku hayaa, siddee wax la yeelaa?
Dadku waxa ay doonayaan sheegsheega ayey ku badiyaan, waxaan filayaa intii aanu boggan wax ku qoraynayn, hal mar ayaanu beel magac qaadnay oo ay sheekadu nala martay. Waxaanuse si wanaagsan tooshka ugu iftiiminay dad iyagu doonayey in ay isku dheereeyaan Qabiil cay, si ay caan u noqdaan. Waxaase noo suurto gashay anaga oo la qaybsanayna akhristayaasha sharafta leh ee rasaas.com in aanu helay kuwa ay yihiin shakhsiyaadkaasi si wanaagsana waxaa loo tusay in uusan cidna isku dheerayn karin waa Mr Garaabo. Mar labad waxaanu leenahay cid alaale cidii u aragtay in beel lagu xumaynayo qoraalada qaar ha ka bogsato uma jeedno, sheekaduse hadii ay gasho way mar beesha waana taariikh taariikhdana lama qarin karo.
Waxaa qoraal koldhaw na soo gaadhay, ka mid ah in Garaabo qoyskoodu ay la dagi jireen beel ka mid ah beelaha dega Qoraxeey, sida na loo sheegayna Aabihii iyo adeerkiiba ay xidhaalo ka qaadan jireen qoys aad caan u ahaa geel badnaa oo lagu magaabi jiray Magan-Daba-Gaabo. Magaan dabo gaab sida na loo sheegay waxaa uu ahaa ninkii ugu geel badnaa Somalida miyiga [taajir], waxaana raaci jiray baa la yidhi geeliisa 200 xidhaale qaate, waxaana ka sii hoos shaqayn jiray 300 ruux oo kale.
Sida na loo sheegay Magan-Gabo-Gaabo, waxaa ku oon bixi jiray caanaha geeliisa Aw iyo Ogaadeen qoladii caydhowdaba, waxaana looga soo guuri jiray meelo fog fog si baahida loo gooyo, Qoysaska qaar baa sida ay isaga dagan yihiin ee geela ay u maalayaan iska noqon jiray caruurtii Magan Dabo-gaab. Aniga malahayga hadii uu Magan-Daba-gaab maanta joogi lahaa waxaa uu siin lahaa dad badan Jinsiyadaha laga doonto dalalka reer galbeedka, Itobiyan badan ayaa ka mid noqon lahaa Somalida Ogadeeniya.
Akhriste nala soo xidhiidhay ayaa waxaa uu noo sheegay in Mr Garaabo iyo reerkoodu ay ahaayeen raaciyadii Magan Dabo-gaab, ka bixitaankiisuna uu ahaa uun intii magaalada la soo galay waa tay Somalidu hore u tidhi[ciirtaa dhamaa caydaa yaqaan]. Haleelo waxaa lahaa Magan Dabo-daab Eebe ha u naxariistee, waxaana haatan Ibagujeeya Mr Garaabo oo ahaa ninkii lagu soo koriyey, Abaal aduun wakaas.
Kol waxay Somalidu odhaa ku odhan jirtay “Geela Magan Dabo-gaab kuwa daba yaal yaanu daba naal” waa xiligii miyiga, magaaladana waxaan soo gaadhay iyada oo dadku kolka ay bahasha [lacagta] lexo jeclaysanayaan la idhaahdo “War ma Uun-laayaa i dhalay”.
Waxaan odhan oo kaliya, Mr Garaabo iyo kuwa ku daba dhuumanaya, murti gabay oo uu lahaa Maxamed Cumar Dage Eebe ha u naxariistee ee ahayd “Afka nin isku weynaynayoo, war iga doonaaya, Oon waalidkii ila sinayn, kuu wadwadi maayo, Wacadkii Ilaah baan maroo waafiyeyn mahayo”.
Qaraan Lagu Qayili Jiray oo la Helay Kuwii ku Qayili Jiray
Qaar ka Mid ah Saraakiishii Hore ee Somaliya, Haatan Jooga Maraykanka oo Halgaad ku Haya Halganka Ummada Somalida Ogadeeniya.